Lithopone vatengesi uye fekitori - China Lithopone Vagadziri
Yakachena chena Lithopone poda BA312 rudzi rutsva rweasina-chepfu, asiri-akasvibisa girini Lithopone poda. Inoshandiswa zvakanyanya mumusika nezvakanakira kuchena kwakakwirira uye simba rekuhwanda repamusoro. Iyo yakavakirwa paBA311 uye inowedzera inovandudza simba rekuhwanda reichi chigadzirwa. , Dispersibility, uye mamiriro ekunze kusagadzikana. Ichi chigadzirwa chine amphoteric oxides: silicon, aruminiyamu yekumiririra mumiriri, asidhi uye alkali kuramba, yakasimba mamiriro ekunze kusagadzikana, anti-yero, yakachena kuchena, yakanaka kupararira, yunifomu chidimbu saizi, yakasimba tinting simba uye decoloring simba, hazvisi nyore kuparadzira yero.
B301 Lithopone ndeye general-chinangwa Lithopone, chena hupfu pakuonekwa, isina-chepfu, isina kunaka, isina hwema, isingasviki mumvura, inogadzikana nemakemikari uye isina alkali, uye inoburitsa H2S gasi painosangana neacids.
B311 Lithopone powder ndeye general-chinangwa Lithopone poda ine chena chitarisiko. Kubva paB301, B311 inovandudza simba rekuhwanda uye kupararira kweLithopone powder. Iyo ine yakasimba makemikari kugadzikana uye yunifomu inoyera saizi kugovera. Yakachena pigment yakavakirwa pane titanium dioxide.